Pumice huremu hwakareruka, porous uye abrasive zvinhu uye yakashandiswa kwemazana emakore muindasitiri yekuvaka uye runako pamwe nemushonga wekutanga.
Inoshandiswawo seabrasive, kunyanya mumapurisa, penzura erasers, uye kugadzirwa kwejean-yakashambidzwa nematombo. Pumice yakashandiswawo muindasitiri yekugadzira mabhuku ekutanga kugadzira pepa rematehwe uye kusungirirwa kwematehwe.
Pumice Stone Yezvekurima
Pumice dombo chinhu chikuru chinogona kushandiswa kune marudzi ese ezvirimwa. Inogona kutora mvura kana fetereza kwenguva yakareba. Izvi zvinogona kuchengetedza chirimwa chako kuti chive muchimiro chakakodzera chekunyorova pasina kudiridza nguva dzose. Pumice dombo rine hupenyu hurefu kana uchienzanisa nemamwe marudzi ezvekurima zvinhu. Iwe unogona kushandisa pumice dombo kutsiva ivhu paunenge uchidyara. Izvi zvichabatsira kuderedza tsikidzi uye mishonga yezvipembenene. Pumice dombo zvakare ine akawanda maminerari anogona kubatsira chirimwa chako kuti chiwedzere kunaka uye chine hutano.
Nhungamiro: Usati washandisa, mushandisi anofanira kunyudza pumice dombo mumvura. Pashure paizvozvo mushandisi anogona kuisa matombo pasi pehari, kusanganisa nevhu, kana kushandisa pumice chete pakudyara senguva dzose. Kunyangwe iyo pumice dombo inogona kuchengetedza hunyoro kwenguva yakareba. Uchiri kuda kudiridza chirimwa chako nguva nenguva. Iwe unogona kuona kubva kune ruvara rwepumice dombo. Kana ichioma kana ruvara rwayo ruchiwedzera kuchena, zvinokurudzirwa kuti udiridze chirimwa chako.
Zvicherwa muPumice Stone
Dombo repumice rinogadzirwa kubva padombo rakanyungudutswa pasi penyika kana sezvatinoridaidza kuti “lava”. Mabota aya anoumbwa nematombo uye zvicherwa zviri pasi penyika. Pumice dombo rine akawanda zvicherwa uye chinhu sezvinoratidzwa patafura pazasi.
Manganese chikamu chinodiwa kune akawanda enzymes. Aya ma enzyme anonzi “gastric juice”. Kana isina, pakati pemashizha kana pakati pemuti inogona kuva nemaronda.
Calcium chikamu chakakosha chechimiro chesero uye inobatsira maseru echirimwa kushanda zvakajairika.
Izvo zvinobatsira kana calcium PaPumice
Calcium inosimbisa pombi dzemvura uye pombi yezvokudya zvezvirimwa. Izvi zvinowedzera kushanda kwemvura uye kuendesa chikafu kunzvimbo dzakasiyana dzechirimwa.
Calcium chikamu chakakosha cheyakajairwa kugadzirwa kwehomoni, senge mahormone, cytokines, ayo anobatsira kusimbisa maruva buds. Kana chirimwa chacho chisina calcium, hormone yemiti inoderedzawo uye inokonzera kuderera kwemaruva ekutumbuka uye kukura zvishoma nezvishoma kwemiti.
Calcium inovaka midzi yakasimba inotora mvura zviri nani. Kana kushayikwa kwecalcium, midzi midzi inopera simba. Midzi masero anogona kuputsika nyore uye chirwere chevhu chinopinda mumidzi nyore.
Calcium inobatsira midzi kurwisa ivhu resaline.
Calcium inobatsira zvirimwa kuunganidza nitrates mukati mayo. Izvi zvinobatsira kuti chirimwa chikure zvirinani kunyanya munguva iyo zvirimwa zvinoda high nitrate. Midzi yemiti yemiti haigoni kukura uye kupfupisa, kana calcium isipo. Paunenge uchikura midzi mitsva, chirimwa chinoda yakakwira calcium.
Pumice Dombo Resefa Substrate
Pumice dombo inzvimbo nyowani inogona kushandiswa sechinzvimbo checoral reef. Iine chitarisiko che spongy asi yakasimba. Iro dombo hariputsike semakorari uye rine hupenyu hurefu. Pumice dombo yakareruka-inorema uye iri nyore kuchenesa. Inogona kubatsira kudzora PH yemvura, ingave mvura ine yakakwirira kana yakaderera PH, dombo repumice richadzora PH yemvura kuti iite 7.0. Izvi zvichaita kuti mvura irambe iri muhutano hwakanaka uye zvichiita kuti uve nehutano hwakanaka kune hove dzako dzaunoda.
Nhungamiro: Nekuda kwehuremu hwayo huremu, mushandisi anofanirwa kunyudza dombo repumice mumvura husiku humwe usati washandisa. Izvi zvichaita kuti dombo rikwanise kunyura munzvimbo yekusefa yedhamu. Kana muchida kuishandisa nekuchimbidza, munogona kuisa chimwe chinhu pamusoro pedombo kuti chibatsire kunyura. Pashure penguva yakati matombo acho achatora mvura yakakwana kuti akwanise kunyura. Kuti uchenese dombo repumice, mushandisi anofanira kurichenesa nemvura asi usariomesa nechiedza chezuva. Kupisa kunouraya tupukanana tunobatsira kuchenesa tsvina yehove.
Pumice Dombo Rekuwachira maindasitiri
Pumice dombo inzvimbo ine hushamwari zvinhu zveDenim wash kana textile wash. Kana uchigeza nepumice dombo, Inogona kugadzira yakasarudzika pateni pane denim.
Pumice inoshandiswa zvakanyanya kugadzira lightweight kongiri uye insulative yakaderera-density cinder blocks.
Mhepo yakazadza mavhesi mune iri dombo rine porous inoshanda seyakanaka insulator.
Iyo yakatsetseka-grained yepumice inonzi pozzolan inoshandiswa sekuwedzera musimende uye inosanganiswa neraimu kuti iite light-weight, smooth, plaster-like concrete.
Iyi fomu yekongiri yakashandiswa kare kare senguva dzeRoma.
Mainjiniya echiRoma akaishandisa kuvaka dome hombe rePantheon nekuwedzera huwandu hwepumice yakawedzerwa kune kongiri kune yakakwirira kukwirira kwechimiro.
Yaiwanzo shandiswawo sechinhu chekuvaka chemigero mizhinji.
Imwe yemashandisirwo makuru epumice parizvino muUnited States kugadzira kongiri.
Dombo iri rave richishandiswa mumisanganiswa yekongiri kwezviuru zvemakore uye rinoramba richishandiswa mukugadzira kongiri, kunyanya munzvimbo dziri pedyo nepanoiswa zvinhu zvegomo rinoputika.
Zvidzidzo zvitsva zvinoratidza kushandiswa kwakakura kwepumice poda muindasitiri yekongiri.
Pumice inogona kuita sesimende zvinhu mukongiri uye vaongorori vakaratidza kuti kongiri inogadzirwa ne50% pumice poda inogona kuvandudza kusimba asi ichideredza kuburitsa gasi regreenhouse uye fossil kushandiswa kwemafuta.
Pumice Yekutarisira Pamunhu
Pumice sipo mabara
Icho chinhu chinoputika chinogona kushandiswa muhupfu kana sedombo kubvisa bvudzi risingadiwi kana ganda.
MuEgypt yekare skincare uye runako zvaive zvakakosha uye makeup uye moisturizer zvaishandiswa zvakanyanya. Imwe nzira yakajairika yaive yekubvisa bvudzi rese pamuviri uchishandisa makirimu, reza nematombo epumice.
Pumice muchimiro cheupfu chaive chinhu chekugadzira mishonga yemazino muRoma yekare.
Kuchengetwa kwembambo kwaikosha zvikuru muChina yekare; zvipikiri zvaichengetwa zvakanatswa nematombo epumice, uye matombo epumice aishandiswawo kubvisa tsinga.
Zvakawanikwa munhetembo yeRoma kuti pumice yakashandiswa kubvisa ganda rakafa kare kare 100 BC, uye zvichida zvisati zvaitika.
Nhasi, dzakawanda dzeiyi nzira dzichiri kushandiswa; pumice inoshandiswa zvakanyanya sekubvisa ganda. Kunyangwe nzira dzekubvisa bvudzi dzakashanduka nemazana emakore, zvinhu zvinokurisa sematombo epumice zvichiri kushandiswa.
“Pumice stones” inowanzoshandiswa mumasaroni ekunaka panguva ye pedicure process kuti abvise ganda rakaoma uye rakawandisa kubva pasi petsoka pamwe chete nemakumbo.
Pumice yakatsetseka yakawedzerwa kune dzimwe mishonga yemazino se polish, yakafanana nekushandiswa kwechiRoma, uye inobvisa nyore nyore plaque yemazino. Mushonga wemazino wakadaro unonyanyira kushandiswa zuva nezuva.
Pumice inowedzerwawo kune zvinorema-basa rekuchenesa maoko (senge lava sipo) seyakapfava abrasive.
Bhawa yedombo rakasimba pumice
Dombo repumice, dzimwe nguva rinonamirwa pamubato, chishandiso chinoshanda chekukwesha chekubvisa limescale, ngura, zvindori zvemvura yakaoma, uye mamwe mavara pamigero yeporcelain mudzimba (semuenzaniso, yekugezera).
Iyo inzira inokurumidza kuenzaniswa nedzimwe nzira semakemikari kana vhiniga nesoda yekubheka kana borax.
Pumice Yemushonga wekutanga
Pumice yakashandiswa muindasitiri yemishonga kwemakore anopfuura 2000. Mushonga wekare weChinese wakashandisa pasi pumice pamwe nevhu mica uye fossilized mapfupa akawedzerwa kune tii. Tii iyi yaishandiswa kurapa dzungu, kuda kurutsa, kushaya hope, uye kusagadzikana. Kumedzwa kwematombo akatsemurwa aya kwakatokwanisa kupfavisa mapfundo uye kwakazoshandiswa nemimwe mishonga yemishonga kurapa gomarara renduru uye dambudziko reweti.
Mumushonga wekumadokero, kutanga mukutanga kwezana ramakore rechi 18, pumice yakagayiwa kuita shuga isingachinji uye nezvimwe zvinosanganisa yaishandiswa kurapa maronda paganda uye cornea.
Mishonga yakadai seiyi yaishandiswawo kubatsira mavanga maronda nenzira ine utano. Munenge muna 1680 yakaonekwa neChirungu naturalist kuti pumice powder yakashandiswa kukurudzira kuhotsira.
Next post: Pumice پٿر برآمد ڪندڙ